Semalt बाट SEO आधारभूत: किन SEO सामग्री मामला
कुनै ब्यापार छिटो बनाउन र आफ्नो प्रोफाइल बढाउन खोज्ने, त्यहाँ एक प्रयास गरीएको र परीक्षण विधि छ कि नतिजा ल्याउन ग्यारेन्टी गरिएको छ - अद्वितीय सामग्रीमा निर्मित बलियो अनलाइन उपस्थिति।
धेरै जसो उद्योगहरूमा, यदि तपाईं अनलाइन हुनुहुन्न भने, तपाईं पनि अवस्थित हुनुहुन्न, र वेबसाइटहरू प्राय: पहिलो स्थान हुन् जुन उपभोक्ताहरूले खरीद निर्णय गर्नु अघि भ्रमण गर्नेछन्। यो विनम्र वेबसाइट एक धेरै शक्तिशाली मार्केटिंग उपकरण र एक नियमित रखरखाव र लगानी आवश्यकता एक बनाउँछ।
एक वेबसाइट बनाउने र यसलाई याद गर्न समय र प्रयास चाहिन्छ यद्यपि धेरै व्यवसाय मालिकहरू छोटो आपूर्तिमा छन्। समय सबै भन्दा पछि पैसा हो, र यसको दृश्यता बढाउनको लागि उत्तम प्रयास गर्ने भए पनि, यातायात वृद्धि वा वेबसाइटबाट बिक्री बढावा देख्न असफल हुनु भन्दा निराशाजनक अरू केहि छैन।
यद्यपि यो त्यस्तो हुनु हुँदैन, र समाधान अद्वितीय एसईओ सामग्रीको रूपमा आउँदछ।
पहिले, तपाईंले सोचिरहनुभयो, एसईओ वास्तवमा के हो? SEO सामग्रीको गतिशीलता मा गहिरो delving पहिले त्यहाँ सुरु गरौं।
SEO खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि खडा छ र वेबसाइट र अनुकूलन गर्नको लागि वेब एनालिटिक्स, कुञ्जीशोध अनुसन्धान र लिंक निर्माण जस्ता विभिन्न उपकरणहरू र प्रविधिहरू समावेश गर्दछ ताकि यो सजिलै गुगल जस्ता खोज इन्जिनहरूले पत्ता लगाउन सक्दछ।
साधारणतया, खोजी ईन्जिनहरूले वेबसाइटहरू र अनलाइन सामग्री क्रगल गर्दछ जस्तै ब्लगहरू र भिडियोहरू निर्णय गर्न को लागी यो विशेष खोजीको लागि प्रासंगिक हो कि होइन। वेबसाइट जति अनुकूलन हुन्छ, र्या the्की up्कनलाई पछाडि छोड्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र खोज इञ्जिन परिणाम सूचीमा शीर्ष स्पटहरूमा जान्छ, जुन जहाँ सबै व्यवसायहरू हुन चाहन्छन।
यो सजिलो र सीधा अगाडि लाग्न सक्छ, तर खोज इञ्जिन एल्गोरिदम नियमित आधारमा परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले खेल अगाडि रहन जारी विश्लेषण र समीक्षा आवश्यक पर्दछ। त्यहाँ एसईओ सामग्री र विशेषज्ञ मद्दतले सबै भिन्नता गर्न सक्दछ।
SEO सामग्री के हो?
त्यसोभए, SEO सामग्री के हो र यो कसरी सिर्जना हुन्छ?
एसईओ सामग्री अनौंठो सामग्री सिर्जना गर्न धेरै एसईओ उपकरणहरू जोड्ने एक चतुर तरीका हो जुन वेबसाइटलाई भीडबाट बाहिर आउँदछ र सही ट्राफिकलाई आकर्षित गर्दछ - त्यो प्रकार जुन बिक्रीमा रूपान्तरण हुन्छ।
उदाहरण को लागी, टर्की मा एक कस्मेटिक र प्लास्टिक सर्जरी कम्पनी एसईओ को माध्यम बाट वेब यातायात बृद्धि गर्न चाहान्छ विशेष गरी युके बजारमा व्यवसायको प्रोफाइल बढाउन र बिक्री बढाउन। समाधानको अंशको रूपमा, Semalt लेखकहरूले वेबसाइटको लागि छ महिनाको अवधिमा अन्य एसईओ टेकनीकको साथ, अद्वितीय सामग्री सिर्जना गरे। नतिजा १ traffic।। प्रतिशतले वेब ट्राफिकमा वृद्धि भएको थियो र वेबसाइटले सर्च इन्जिन नतीजामा शीर्ष -१० मा बनायो। अभियानको सफलताले ग्राहकको लागि व्यवसाय वृद्धि भयो र नयाँ क्षेत्रहरूमा तिनीहरूका सेवाहरूको विस्तार गर्‍यो।
माथिको केस स्टडी विस्तृत एसईओ अभियानको भागको रूपमा एसईओ सामग्री कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेको एउटा उदाहरण मात्र हो। SEO सामग्रीको सफल अनुप्रयोगको बारेमा अधिक केस स्टडीहरू यहाँ फेला पार्न सकिन्छ ।
अर्को, Google को खोज इञ्जिन मापदण्ड पूरा गर्ने र खोज परिणामहरूको शीर्षमा वेबसाइटहरू धकेल्न मद्दत गर्ने SEO सामग्री सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएका केही प्रविधिहरू हेरौं:
वेब विकास - एक राम्रो डिजाइन गरिएको वेबसाइट भनेको डिजिटल कम्प्युटरको लागि डिजिटल मुख्यालय र कलिंग कार्ड हो, साथ साथै अनलाइन नोटिस गर्नको लागि पहिलो चरण हो। पहिलो प्रभावहरू वास्तविक जीवनमा उनीहरूले जति अनलाइन गर्छन्, र राम्रो देखिने वेबसाइटले नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
वेब एनालिटिक्स - सुधारको पहिचान गर्न वेबसाइट संरचना विश्लेषण र प्रतियोगीहरूको बारेमा जानकारी स about्कलन यस खेलको अगाडि रहन एक निश्चित आगो विधि हो। नियमित विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरू त्यसपछि एसईओ अभियानको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्दछ।
कुञ्जीशब्दहरू - विशाल लक्षित दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न सब भन्दा सान्दर्भिक व्यावसायिक कुञ्जी शव्दहरूको छनोट गर्नु एसईओको केन्द्रीय अंश हो। एकचोटि पहिचान भएपछि, कुञ्जी शव्दहरू वेबसाइट भरमा वितरण हुन्छन् जुन सर्च ईन्जिन क्रॉलर द्वारा लिन सकिन्छ।
मेटा ट्यागहरू - सब भन्दा सान्दर्भिक व्यावसायिक कुञ्जी शव्दहरू छनौट गरेपछि मेटा ट्यागहरू अर्को एसईओ बढावा प्रदान गर्न पदोन्नति अन्तर्गत कीवर्डहरूको आधारमा सिर्जना गरिन्छ।
लि building्क निर्माण - प्रविधि टेबुल सम्बन्धित वेब स्रोतहरूमा लिंकहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ। लिंकहरू त्यसपछि पार्टनर साइटहरूको नेटवर्कको माध्यमबाट अद्वितीय सामग्रीमा एकीकृत हुन्छन्।
माथिका सबै एक विशेष उत्पादन वा सेवाको लागि वेबसाइटले प्रचार गरिरहेको हो भनेर अनौंठो सामग्रीको निर्माणको वरिपरि केन्द्रित छ। जब राम्रोसँग अनुकूलित हुन्छन्, वेबसाइटको सामग्रीहरू अद्वितीय एसईओ सामग्रीमा रूपान्तरण हुन्छन्, र त्यो हो जब जादू हुन्छ।
SEO सामग्री को प्रकारहरु
हामीले अब एसईओ र एसईओ सामग्रीको एक सिंहावलोकन हेर्‍यौं, तर एसईओ सामग्रीका बिभिन्न प्रकारहरूलाई नियालेर हेरौं, "अनौंठो सामग्री" भन्ने शव्दले भनेको भनेको के साथ सुरू गरेर।
अद्वितीय सामग्री केहि हो जुन एक विशेष उद्देश्यको लागि सिर्जना गरिएको हो - उदाहरणका लागि, विशेष वेबसाइटको लागि। यसले मौलिक लेखन र / वा छविहरू र भिडियोहरू समावेश गर्दछ, कुञ्जी सन्देशहरू र जानकारी समावेश सहित व्यवसायमा अद्वितीय। यो सामग्री हो जुन ग्राहकको व्यक्तिगत आवश्यकतालाई अनुरूप बनाईएको हो र समग्र एसईओ रणनीतिलाई दिमागमा राखिएको छ।
यहाँ अनौंठो सामग्रीको मुख्य प्रकारका केहि उदाहरणहरू छन् जुन एसईओ रणनीतिको अंशको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि सिर्जना गर्न सकिन्छ:
ब्लग पोष्टहरू - ब्लगि unique अनौंठो सामग्री सिर्जना गर्न र जानकारी र सल्लाह प्रदान गरेर वेबसाइट आगन्तुकहरूसँग सम्पर्क राख्ने उत्तम तरिका हो। ब्लग शीर्षकहरूले अतिरिक्त एसईओ बढावा र समग्र एसइओ अभियानको साथ सामग्री पign्क्तिबद्ध गर्नका लागि कुञ्जी शब्दहरूमा पनि फोकस गर्न सक्दछ।
पृष्ठहरूको बारेमा - एक बारेमा पृष्ठ सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईं को हुनुहुन्छ, तपाईं के गर्नुहुन्छ, र कसरी तपाईं समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेको व्याख्या गर्न प्रम अवसर हो। शीर्ष एसईओ परिणामहरूको बारेमा पृष्ठमा कुञ्जीशब्दहरू र अप्टिमाइज गरिएका छविहरू समावेश गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।
उत्पादन / सेवा विवरण - यस प्रकारको सामग्रीले व्यवसायले के गर्छ व्याख्या गर्न मद्दत गर्दछ र सबै अन्य सामग्री र पृष्ठहरूसँग प relevant्क्तिबद्ध गर्न प्रासंगिक एसईओ कुञ्जीपाटी फिचर गर्नुपर्दछ।
छविहरू - छविहरू सामग्री राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न चयन गरिएका छन् र त्यसपछि उपयुक्त शीर्षकहरू र Alt टेक्स्ट थपेर अनुकूलित हुन्छन् ताकि थप खोज ईन्जिनले सामग्री फेला पार्न सक्दछन्।
भिडियोहरू - स्प्यान्डर भिडियोहरू ग्राहकलाई देखाउन एक उपयोगी उपकरण हो जुन तपाईंको व्यवसायको बारेमा हो र तपाईं कसरी प्रतिद्वन्द्वी कम्पनीहरूबाट भिन्न हुनुहुन्छ। प्रभावकारी भिडियो सामग्री निर्माणले कन्सेप्ट विकास गर्न, लिपि लेख्न र उत्पादनको ख्याल राख्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
SEO विशेषज्ञहरु संग काम गर्दै
कुनै विशेष विषयमा विशेषज्ञ बन्नको लागि रातै रात हुने छैन। यो कौशल र hone हासिल गर्न समय र अनुभव लिन्छ। समान एसईओ विशेषज्ञहरु लाई लागु हुन्छ।
एसईओ को अनलाइन दुनिया र एसईओ सामग्री को निर्माण को प्रक्रिया डरलाग्दो र भ्रामक लाग्न सक्छ, विशेष गरी व्यस्त व्यापार मालिकहरु वा उनीहरुको एसईओ यात्रा मा शुरू गर्नेहरुको लागी। तर विज्ञहरूसँग काम गरेर, प्रक्रिया सरल र सजीलै प्रबन्ध गर्न सकिन्छ।
Semalt एक कम्पनी हो जुन एसईओ, आईटी र मार्केटि experts विशेषज्ञहरूको टोलीले निर्माण गरेको छ ग्राहकलाई उनीहरूको वेबसाइटहरूको अधिकतम एसईओ उपकरणहरू र प्रविधिको माध्यमबाट बनाउन मद्दत गर्न।
किभ, युक्रेनमा मुख्यालयको साथ, Semalt एक पूर्ण-स्ट्याक डिजिटल एजेन्सी हो अनलाईन व्यवसायहरू सफल बनाउनको लागि। एक दशकको लागि, Semalt ले एसईओ पदोन्नति, वेब विकास, उन्नत विश्लेषण सेवाहरू, सामग्री निर्माण र भिडियो उत्पादन प्रदान गरेर विश्वभरका ग्राहकहरूसँग काम गरिरहेको छ। नतिजाको रूपमा, 5,000००० भन्दा बढी वेबसाइटहरू Semalt को SEO समाधानहरू प्रयोग गरेर गुगल खोजी परिणामहरूको शीर्षमा पुग्न अनुकूलित गरिएको छ।
Semalt को विशेषज्ञता को कोर दुई कुञ्जी सेवाहरु को बारे मा केन्द्रहरु - AutoSEO र FullSEO।
AutoSEO साना व्यवसायहरूको लागि डिजाइन गरिएको एक उपकरण हो जुन साइट ट्राफिक बढाउन चाहन्छ तर SEO सेवाहरूमा ठूलो लगानी गर्न तयार हुँदैन। एसईओ नमूना बनाउन यो सस्तो र सजिलो तरीका हो, विशेष गरी शुरुआतीहरूको लागि। सेवाले Semalt का विशेषज्ञहरूसँग काम गरीएको खोजशब्दहरू पहिचान गर्न लिंक निर्माण अवसरहरू र वेबसाइटलाई खोजी ईन्जिनको स्तर माथि सार्न सहयोग पुर्‍याउने अवसरहरू प्रदान गर्दछ र 100 प्रतिशत प्रभावकारिताको आश्वासन दिन्छ।
फुलसेओले ठूला व्यवसायका लागि, धेरै कम्पनीहरूका व्यक्तिहरू वा वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्न केही बढी पैसा लगानी गर्न तयार हुनेहरूको लागि एकीकृत एसईओ समाधान प्रदान गर्दछ। फुलसियो गहन विश्लेषणमा आधारित छ, महत्वपूर्ण वेबसाइट ट्राफिक वृद्धिको लागि अनौंठो सामग्री सिर्जनामा फोकस सहित र गुगल-टोपलाई वेबसाइट पठाउन उपयोगी उपकरण हो।
AutoSEO र FullSEO दुबै संग, प्रतिभाशाली Semalt लेखकहरू SEO विशेषज्ञहरू र ईन्जिनियरहरूसँग वेबसाइट अनुकूलित गर्न र SEO अनुकूल सामग्री सिर्जना गर्न काम गर्दछन्। Semalt टोलीसँग अनलाइन क्षेत्रका लागि अनौंठो सामग्री सिर्जना गर्ने बर्षेको अनुभव छ र लेखकहरू SEO उत्पादनहरूको मार्गदर्शन द्वारा निर्देशित हुन्छ तैयार उत्पादन प्रदान गर्न जुन सबै सही बक्सहरूमा टिक्दछ। परिणाम लगानी र दीर्घकालीन परिणामहरूमा सकारात्मक प्रतिफल हो।
यसैले एसईओ सामग्रीको महत्त्व छ, र विशेषज्ञहरूसँग काम गर्दा व्यवसायलाई अनलाइन दृश्यता बढाउन र एसईओ मार्फत बिक्री बढाउन मद्दत गर्दछ।